डा.बाबुराम भटराईलाई कृष्णहरी केसीकाे खुला पत्र | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home राजनीति डा.बाबुराम भटराईलाई कृष्णहरी केसीकाे खुला पत्र
हिजो डा. वावुराम भट्टराईले कक्षा १० पनि नपढेकाले ज्ञान विज्ञानका कुरा गर्न सुहाउदैन भनेछन् । यो औपचारिक शिक्षाको कुरा भयो ।
कुरा सुन्दा ठीक जस्तो पनि लाग्छ । तर मैले धेरै पढेकाहरुलाई पनि राम्रैसँग हेरेको छु । क. पुष्पलाल जो कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक हुुनुहुन्छ । जसले पनि १० भन्दा माथी पढ्नु भएन । तर उहाँको विश्लेषण संश्लेषन निचोड र रचनाहरु पढ्दा लाग्छ तपाईको भन्दा केही कमी छैन । उहाँलाई कम पढेको भनेर दोस्रो महाधिवेशन ताका चर्को वहस छेडिएको रहेछ । त्यसै भएर होला उहाँलाई महासचिव वनाइएन । त्यसमा अरु धेरै कारण होला तर यो पनि जोडिएको थियो । पछि मनमोहन चीनमा उपचारथ रहदा सम्मेलन गरेर डा. केशरजंग रायमाझी महासचिव भए । तर उनीको त्यो उपाधी नेपाली जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन काम लागेन । न उनको पुस्तक घरघरमा पुगेका छन् । नत जनतको दिलमा नै । वरु पुष्पलालको पुस्तका घरघरमा देख्न सकिन्छ र उहाँ (क. पुष्पलाल)लाई जनजनको दिल दिमागमा भेट्न सकिन्छ । उहाँको वारेमा पि.एच.डि. गर्ने अभियान थालिएको छ । तर उहाँ त मेट्रिक मात्रै हो । त्यसै गरी गौतम बुद्धले पनि उपाधी लिएका थिएनन् तर उनैको चर्चा विश्वमा वढी छ उनैको अनुयायी र उनको विचारले सिंगो मानव जीवन र जगतलाई दिशानिर्देश गरीराछ । रामायण लेख्ने वाल्मीकी हुन् या भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नायक गान्धी सवैले पि.एच.डि. उपाधी पाएका थिएनन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि विद्यावारीधी गरेका होइनन तर उनका कविता, कथा वा उपन्यासमा मात्रै पनि विद्यावारिधी गर्नेको लर्को छ । यस्ता उदाहरणहरु धेरै देख्न सकिन्छ ।
तर मलाई विनम्रतापूर्वक डा. वावुरामलाई सोध्न मन लागिराछ क. पुष्पलाल जसले १० मात्र पढ्नु भो तर उहाँले मानिसको अन्तराष्ट्रिय जाति हुनेछ । मानव मानव वीच भएको विभेद अन्त्य गरिनु पर्छ र म कुनै एक जातभन्दा माथि उठ्नु पर्छ र मानव जातीको कल्याण गर्नुपर्छ भन्दै नामको पछाडि थर समेत नलेखी केवल पुष्पलाल मात्र लेख्नु हुन्थ्यो । तर तपाईले त जात जातको नामा राज्य वाड्दै जातीय संगठन समेत खोल्दै जातीय मुक्तिमोर्चा नै गठन गर्नुभयो । जतिवेला तपाईले विद्यावारिधी प्राप्त गरिसक्नु भाथ्यो । यसरी हेर्दा तपाईको औपचारिक शिक्षा भन्दा पुष्पलालको स्वअध्ययन नै जनताको लागि कामयावी भएका होइनन र डा. साव ? सवाल उसले कति वढेको होइन उसले के सिक्यो र गर्दैछ भन्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीहरुको शिक्षा केवल पढ्न र लेख्न मात्र आउने खालको भयो । केही गर्न नआउने शिक्षा जति पढे पनि के काम ? तसर्थ अव केही गर्न आउने शिक्षाको जरुरी हो । स्वस्थानी मात्रै पढ्ने हो भने त कक्षा ६ पढे पुगी गो नी । अर्को प्राविधीक शिक्षा कै कुरा गर्नुभएको हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षा पनि केवल मेसिनको प्रयोग गर्ने खालको मात्र रहेको छ । अव मेसिन वनाउने र चलाउने शिक्षा एकैचोटी दिने खालको हुनुपर्दछ । यसो भन्नु के अज्ञानता हो डा. साव ? अव म पनि अनपढ नै भएँ ? फेरी नि डा.साव तपाईले म संगै पढ्दै गरेका मेरा साथिलाई वुर्जुवा शिक्षा काम छैन, संस्कृत किताव च्यात, वन्दुक वोक भन्दै छापामार वनाको होईन ? त्यसो गर्नु भूल रहेछ पापै गरिएछ भनेर तिनीहरूलाई पढाउन तिर किन नलागेको नि ? फेरी त्यही उमेर समुहकि तपाईकी छोरीले जनयुद्ध कालमा नै कसरी डिग्री भ्याईन ? के तपाई र जनता अनि कार्यकर्तामा यति ठूलो पर्खाल पार्नु ठीक थ्यो ? हिजो वाध्यतावस औपचारिक शिक्षा छोडाएकालाई त्यही शिक्षा नपढेकाले अपमानित हुने कि तपाई जस्ता वाध्यता पार्नेलाई हामीले अपमान गर्ने हं डा. साव ? अनि प्रमाण पत्रको लागि नभई ज्ञान र सीप आर्जन हुनेगरी पढेका सवै अनपढ नै हुन् र डा. साव ?
ठीक छ त्यसो भए के नपढेकाले चै सुन्दर सपना देख्न मिल्दैन, नपढेकाहरु रेल चढ्न मिल्दैन ? पढाई भनेको उसको व्यवहार हो डा. साव । पढेर तपाईजस्तो ढोँगी भए भने के काम ? वरु नपढेर केपी ओली भए कै वेस । अनपढ भएर के भो र ? केपि ओलीले नेपालीको शिर माथि पु¥याए । स्वाभिमानलाई सगरमाथा जस्तो उचोँ वनाए, १४ वर्ष जेल वसे तर अनुचित सम्झौता गरेनन् । म पनि केपि ओलीकोे घरमा गएको छु उहाँको घरमा धेरै धेरै पुस्तक मैले देखें । ती पुस्तक सजाउनकै लागि मात्र थिए होलान त डा. साव त्यहाँ ? औपाचारीक शिक्षा सँग सँगै के.पी. वलीको जस्तो स्वअध्ययन पनि हुन पर्छ भनेको भए हुने थियो डा. वावुराम जी । यसरी अपमानित शव्द नवोल्ने की तपाई जस्तो पढलेख भएकाले ।
तपाई आफै भन्नुस त केशरजंग र पुष्पलाल तुलना गर्दा कसको तराजु माथि जान्छ ? पढ्नु मात्र ठूलो कुरा भएन डा. साव, यहाँ त जान्नु र मानवीय सोचको विकास गर्नु ठूलो कुरा हो । विन लादेन पनि त राम्रो विद्यार्थी थियो नि तर उसले मानवीय धर्म निर्वाह गर्न सकेनन् ।
म त भन्छु औपचारिक शिक्षामा उपाधी पनि लिऊ र केपी जसरी स्वअध्ययन पनि गरौं । —